Miyaad Dhiirrigelisaa Mise Dhiirrigelisaa Akhristayaashaada? | Martech Zone
Talaado, Maarso 20, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Caawa waxaa i soo diray e-mayl ka socda Xuduudaha. Waxaa jira tartan ka socda Goobaha si aad wax uga qorto sida macallinku noloshaada u beddelay.
Boodh dhajin dhowaan ah oo ka socota Brian Clark oo ka tirsan CopyBlogger ayaa igu dhiirrigelisay, 5 Khalad Grammatical ah oo kaa dhigaya inaad carrab la 'tahay. Brian wuxuu qoray boostada in ka badan 2 toddobaad ka hor, laakiin tan iyo wixii ka dambeeyay way igu kacsanayd. Waxaan si joogto ah ugu halgamayaa naxwaha iyo higgaadinta.
Ku saabsan tartanka: Ma taqaanaa macallin isbeddel sameeyey? Xuduudaha iyo Goobaha waxay jeclaan lahaayeen inay maqlaan sheekadaada si aan ula wadaagno kuwa kale uguna dabaaldego shaqada cajiibka ah ee macalimiintu qabtaan maalin kasta. Xudduudyada ayaa xulan doona afar qof oo isugu soo haray finalka si ay u helaan $ 50 Xuduudaha Hadiyadda iyo midka guuleysta ee hela $ 250 Xuduudaha Hadiyadda.
Maalintii waxaan dib u milicsadaa wixii aan akhriyay, bartay oo aan gaadhay. Gaariga aan u socdo, inta badan waxaan ku ururiyaa fikradahaas madaxayga oo waxaan u abaabulaa inay wax ku qoraan balooggayga. Waqtiga aan dhab ahaantii u fadhiisto inaan qoro, waxyaabaha ku jira ayaa diyaar u ah inay qarxaan. Waxaan u muuqdaa inaan wax ku qoro 'durdurrada miyir-qabka'. Si dhakhso leh uma qori karo… markaa weedhahayga iyo baaragaraafyadu waxay u muuqdaan kuwo khaldan oo ku boodaya.
Marwalba, waxaan ka tagayaa qaladaad yar. Waxaan u keydisaa boostada sidii qabyo. Waxaan aqriyay qabyo qoraalka. Waxaan cadeyn u aqrinayaa qoraalka. Waan xalliyaa khaladaadka oo dib ayaan u soo daabacaa qabyo-qoraalka marar badan. Ugu dambeyntiina, waxaan daabacaa boostada… oo aan mar kale caddeeyaa. In kasta oo aan taxaddar weyn yeesho, weli waxaan ka tagi doonaa mid ka mid ah khaladaadkaas oo 'iga dhigaya qof carrab la'.
Laakiin iga joojin maayo qorista. Waan diidayaa.
Mashruuca Isu-imaatinku wuxuu igu dhiirrigeliyey inaan wax ka qoro macallinkayga Ingiriisiga ee fasalka 8aad, Mrs. Rae-Kelly. Haddii aadan daqiiqad ama labo ku qaadan inaad aqriso boostada, waan ku buuxin doonaa. Waqtigaas noloshayda waxaan ahaa mid aan gabi ahaanba isku kalsoonayn naftayda waxaanan aad ugu baahanahay qof i siiya sabab aan ku helo ixtiraam naftayda ah .
Intii aan diirada saari lahaa qoraalkayga xun, higgaadinta, iyo naxwaha, Mrs. Rae-Kelly waxay u kuur gashay shaqadayda si aan u helo waxa wanaagsan halkii aan ka xumaan lahaa. Anoo xoogga saaraya dhanka wanaagsan, waxaan doonayay inaan wax barto oo aan u soo saaro shaqo weyn Mrs. Rae-Kelly. Waxaan dib u eegi lahaa shaqadeyda khaladaadkii horey u dhacay waxaanan sameyn lahaa dadaal kasta si aanan markale u dhicin.
Mrs. Rae-Kelly waxay garatay sida loo dhiirigaliyo loona dhiso isku kalsoonaanta ardaydeeda. Taasi waa dhif iyo naadir labadaba macallimiinta iyo hoggaamiyeyaasha xilligan iyo maanta. Waan ogahay in Brian uusan u qorin boostada 'inuu iga dhigo mid carrab la' laakiin ay hubaal tahay inuu sameeyay (walina wuu i dhibayaa). Rajadayda idinka shacabka ah ee ka fekeraya baloog garaynta ama blogging-ka ayaa ah in qoraalada sidan oo kale ah aysan idinka niyad jabin.
FIIRO GAAR AH: Brian's blog waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican shabaqa. Waa kheyraad aad u wanaagsan waxayna iga caawisay inaan hagaajiyo qoritaankeyga oo aan koobiyeysto xirfadaha qorista si aad u weyn. Waa bog farxad leh oo qumman oo aan waligood loo isticmaali doonin in lagu dhiirrigeliyo qorayaasha… taas lidkeeda waa run!
Uma hadli karo dhamaan boggaga internetka, laakiin waxaan kaa cafin doonaa qaladaadkaaga waxaanan rajaynayaa inaad tayda ii cafiyi doonto. Ma aqriyo bartaada internetka maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan helo khaladaadkaaga - Waan aqriyaa maxaa yeelay waan kaa bartay ama waan ku raaxeystaa qoraalkaaga. Isla mar ahaantaana, waxaan rajaynayaa inaad waqti qaadan doontid inaad ku buuxisid foomkeyga xiriirka haddii "aan u muuqdo mid carrab la '". Weligay ka xanaaqi maayo… mid ka mid ah akhristayaashayda ayaa ku qasbanaaday inuu saddex jeer iigu caddeeyo emayl markii aan qoro talo bixin halkii aan talo ka bixin lahaa (argh!).
Waxaan aaminsanahay in naxwaha iyo higgaadinta ay sii wanaagsanaanayaan. Waan fahansanahay, aqristayaasha qaar, qaladaadka sida kuwa oo kale ah inay dhaawacayaan kalsoonida iyo sumcadayda sidaa darteed waxaan u dadaalayaa sidii aan u hormarin lahaa. Waxaan rajeynayaa, inaad xoogaa i yaraysay oo aad diiradda saartay farriinta oo aanad khaladaadka dhicin!
Macallimiinta wanaagsan waxay toosiyaan ardaydooda, ardayda waaweyni way dhiirrigeliyaan. Waad beddeli kartaa hogaamiye, tababare, wadaad, waalid ama blogger meel ka mid ah macallinka waana runtaa.
Waan qori karay sida "jacayl adag" Doug, laakiin runtii, adeegsiga "carrab la'aanta" cinwaanka waxay ahayd kaliya kordhinta awooda jiidaya. Waxaa ii soo baxday in uu ahaa qoraalkii ugu caansanaa ee aan abid qoro, kaasoo ahaa mid naxdin leh.
Waxaan rajeynayaa inaysan jirin dareen adag. 🙂
Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan dib u qoray qoraalkan si uusan u dhawaaqin habkaas! Balooggaagu wuxuu ahaa isha weyn ee macluumaadka iyo dhiirigelinta. Waan ogahay inaadan sidaa ula jeedin haba yaraatee - si fudud baan u ahay xasaasiyad tan iyo markii 'naxwe ahaan-loolan iga haysto'. 🙂
Halkii laga niyad jabi lahaa, balooggaagu wuxuu ii ahaa dhiirigelin weyn aniga (waana hubaa kuwa kale oo badan). Ereyga 'carrab la' ayaa igu dhegay tan iyo markii aan aqriyay umana muuqan karo inaan sii daayo.
Sidoo kale, waxaan dareemay in badan oo faallooyinka ah (waa la i qoray) sidaas darteed qaar badan oo ka mid ah faallooyinka ayaa si toos ah loola jeedaa! Qoraalkaagu wuxuu caawin doonaa dad badan (wuu i caawiyay). Waxaan rajeynayaa in faallooyinka aysan cidna ku niyad jabin qorista. Waxay u baahan tahay tababar iyo samir naftaada ah!
Aad baad ugu mahadsantahay hubinta boostada! Waad ku mahadsan tahay dhammaan dhiirigelinta.
Waxaan u maleynayaa inay ahayd hab wanaagsan oo dadka lagu xusuusiyo qaladaadkooda. Waa hubaal inay u egtahay mid adag in la yiraahdo carrab la 'laakiin waa sida ay dadku u helaan dareenka. Xaqiiqdii waxay ahayd qaabkiisa waxbarid.
Waan ogolahay, Howie. Way i caawisay waxayna ahayd boosteejo cabsi badan. Si la yaab leh, waxaan rajeynayaa inaysan 'ka niyad jabin' dadyowga qorista qoraallada sidan oo kale ah. Ujeeddadaydu ma ahayn inaan ku dhufto Brian (runtii waan jeclahay bartiisa). Ujeeddadaydu waxay ahayd oo keliya inaan hubiyo inaan eegno inaan midba midka kale dhiirrigelinno.
Xaqiiqdii ma doonayo in dadku ka fogaadaan baloog garaynta haddii aysan si fiican wax u qori karin. Waxa cajiibka ah ee ku saabsan baloog garaynta ayaa ah in dadku wax ka qoraan waxay yaqaanaan. Mararka qaar naxwaha iyo higgaadinta kuma jiraan qaybtaas… laakiin waxyaabaha sida horumarka, waalidnimada, iimaanka, iwm waa waana in lala wadaago!
Waxaad si sax ah u qeexaysaa waxa aan dareemayo markii aan mowduuca ku daray inaan ku daro boggeyga waxaan dareemayaa in maskaxdaydu iga luntay. Waxaanan u maleynayaa in akhristaha balooggu uusan wax badan ka hayn naxwaha iyo higgaadinta, muhiimaddu waa waxa ku jira.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan blogga ayaa ah inaad kordhiso xirfadahaaga qorista, sida boostada boostada waxaad kaheli kartaa khibrada oo aad ku aqoonsan kartaa khaladaadkaaga, gaar ahaan dadka ka imanaya wadan aan lahayn Ingiriisiga oo ah luqadda 1aad tusaale ahaan My self
Tusaalahaagu waa tusaalaha ugu fiican - xitaa kama aanan fikirin dad ehel u ah af Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad! Internetku ma laha xuduudo luqadeed waana inaan si buuxda u taageernaa uguna mahadnaqnaa boggaga internetka ee wali ku hawlan sidii ay u baran lahaayeen Ingiriisi gabi ahaanba.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga! Iyo shaqo weyn bartaada.
Waan ku raacsanahay in nuxurku ka muhiimsan yahay laakiin kama baxsan karno xaqiiqda ah in akhristayaasha qaarkood ay ka walaacsan yihiin waxa qorayaashu qoreen. Ama waxaa laga yaabaa, inay u maleynayaan inaad awood u leedahay inaad qorto maqaal si dabiici ah waxay ka dhigan tahay inaad tahay qoraa wanaagsan. Taasna, higgaadinta iyo naxwaha saxda ah.
Markay ku saabsan tahay qoraallada maqaallada iyo maqaallada, naxwe ahaan
khaladaadka * ma * kaa dhigayaan inaad carrab la 'tahay sababta oo ah macnahaaga
wuu khaldaa! (sida kiiskaaga talo bixinta VS)
Laakiin marwalba waxaan fiiriyaa tusmada… oo ah
adag sababtoo ah waxaan u maleynayaa naftayda inaan ahay akhriste
inkasta oo aanan shahaadad haysan 🙂
Waa adduunyo kale marka laga hadlayo alaabada dadkaas
lacag bixi! Hadday ka kooban tahay lacag la'aan, meh, naxwaha iyo
khaladaadka higgaadinta ayaa meel walba yaala.
Ha u dilin naftaada si xun =) Cidina kamaamilna (iyo maya
mid ayaa noqon doona :))